China 1940-19 * 40W nnukwu anu anya na-akpụ akpụ isi na mbugharị na n'usoro rụpụta na ụlọ ọrụ | Banyere
1940-19 * 40W nnukwu anu anya na-akpụ akpụ isi na mbugharị ma na-agbagharị
19 * 40W nnukwu anya bekee na-akpụ akpụ isi ya na mbugharị ma na-agbagharị ugbu a na 1940 bụ ngwaahịa nke abụọ gafere, emelitere ya na nke pere mpe, nke fechaa, usoro siri ike karị. Enweela anya anya nke 19x40w nke mbụ na ahịa na 2016, ọ bụ ụlọ ọrụ mbụ na China nke mepụtara, mepee ma rụpụta 40W & 60W dugara isi iyi anya anya ọkụ na China. Ugbu a anyị hụrụ bụ nke kasị nta & lightest arọ elu ike ike anu anya na China ahịa.
Agba agba nke 19 dị ike RGBW ikanam nwere ike ịmepụta ọmarịcha ọkụ ọkụ na ntụgharị dị nro dị mma maka usoro 16bit LED dimming. Mmetụta vidiyo dị omimi na-enweta ngwa ngwa site na ịdepụta pikselụ nke ọ bụla
Asambodo: OA. RoHS
19 * 40W nnukwu anu anya na-akpụ akpụ isi na mbugharị ma na-agbagharị
Anyị bụ ndị mbụ factory na China na-amalite R&D na ngwaahịa na 40W & 60W Dugara anu anya mmetụta ọkụ. A na-ere ụdị ọkụ ndị a nke ọma kemgbe 2016 mgbe anyị malitere n'ahịa, anya 19x40W a na-etinye anya na bekee na 2018 Korea Winter Olympic na ọtụtụ ndị a ma ama na nnukwu ihe ngosi. E jiri ya tụnyere ọgbọ mbụ anyị nke anya 19x40w (ụfọdụ ụlọ ọrụ ugbu a na-eji ihe yiri nke a eme ihe), anya ọhụrụ 19x40w ị na-enyocha bụ nke pere mpe, na-adịchaghị fechaa, na-agbanwe agbanwe, ma dịkwa mfe nrụzi. Mfe ịrụ ọrụ idozi mkpọchi na mpịachi nko na-eme ka ha dị mfe iji, weta na ntinye.
Isi mmalite 19 * 40W rgbw 4in1 Led Mkpebi Pan / Tilt 8/16 ntakịrị
Doo n'akuku 3 Celsius - 45 Celsius Pan 540 Celsius / 630 Celsius
Oriri Ike 750W Tilt 270 Celsius
Modkpụrụ Njikwa DMX512 / Master-Slaver / Auto-Run / /da / RDM Ngosipụta 180 Celsius reversible 1.8-inch TFT agba ngosi
Ọnọdụ DMX 21/23/35/78/92/97 / 99CH Data In / Out oghere 3-pin & 5-pin XRL oghere
Njirimara Ogwe Ike PowerCon n'ime / apụ
Ikanam otu akara Iwu Nchedo IP20
nwere ike gosiputa akụ, nọmba, leta na usoro Nkọwapụta
High-arụmọrụ ngwa anya usoro Akụkụ 376x280x418,5 mm; NW: 16.5 kgs
utịp ifuru mmetụta plus mbugharị Ọkọlọtọ ngwugwu: katọn; Ọnọdụ ụgbọ elu na nhọrọ
Fan ọrụ ọsọ auto auto kemeghi na isi okpomọkụ Asambodo
A na-etinye nko mkpuchi OA, ROHS
Nkọwapụta Ngwaahịa Ngwaahịa
Nke gara aga: 760-7x60W doo anya na nsị anya anya na-eduga na-akpụ akpụ isi na ahịa ọkụ
Osote: 2720-IP65 n'èzí strobe na-asacha ọkụ na 960 × 0.2W Led